Canton Fair ၏လှပသောအပြုအမူကိုပြသရန်အထွေထွေမန်နေဂျာ Colin ၏ ဦး ဆောင်မှုအောက်ရှိစီးပွားရေးအသင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Canton ပြပွဲကိုရည်ညွှန်းပြီးတစ်ခါမျှမရှိခဲ့ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါသည်ပြပွဲတွင်ဖောက်သည်များနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီးပွားရေးအသင်း၏ဓာတ်ပုံဖြစ်သည်။
ALLWIN သည်ဖောက်သည်များနှင့် COVID-19 ခက်ခဲသောအချိန်များအထိအလုပ်လုပ်သည်
၂၀၂၀ အစတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးရောဂါကူးစက်ခြင်း-COVID-19 ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ စက်ရုံများစွာသည်နှစ်လနီးပါးထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်တန့်ခဲ့ရသည်။ ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကစပြီးပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ရရှိခဲ့တယ်။ သို့သော်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ဤဗိုင်းရပ်စ်သည် ပို၍ လေးနက်လာသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တစ် ဦး ...
ALLWIN - လူကြိုက်များသောစာရေးကိရိယာပစ္စည်းပေးသွင်းသူ
လွန်ခဲ့သော ၂ လကဘရာဇီးရှိဖောက်သည်တစ် ဦး သည် ၁x ၂၀ လက်မကွန်တိန်နာပစ္စည်းများကိုမှာယူခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအကုန်မှာသူနဲ့သူ့ဇနီးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိုဒေါင်ကိုစစ်ဆေးဖို့လာပါတယ်။ စစ်ဆေးပြီးနောက်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ALLWIN ထုတ်ကုန်များကိုအလွန်ကျေနပ်သည်။ ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အရမ်း ၀ မ်းသာတယ်၊
PVC Mat သည်သံမဏိစမ်းသပ်မှု ၂.၀ RoHS အားအောင်မြင်စွာအောင်မြင်ခဲ့သည်
၁။ စာရေးကိရိယာစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်စာရေးကိရိယာသည်လူများ၊ သင်ယူခြင်း၊ ရုံးခန်း၊ စီးပွားရေးနှင့်နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့်အတူစာရေးကိရိယာအမျိုးအစားကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်သည်။ ခေတ်သစ်အဆင့် ...
1. ဖြတ်တောက်ဖျာ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများ? ဖြတ်တောက်ခြင်း pad သည်စက္ကူပုံစံကစားသမားများတပ်ဆင်ရမည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြတ်တောက်ခြင်းဖျာသည်စက္ကူမော်ဒယ်လ်ကစားသမားများတပ်ဆင်ရမည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ က။ ဖြတ်တောက်ခြင်းဖျာသည်ဓါးသွားကိုကာကွယ်ပြီးဓါးသွား၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ပေးလိမ့်မည်။ ခ။ အသုတ် ...
ထုတ်လုပ်သူနှင့်ရောင်းသူအကြားဆက်ဆံရေးသည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအရောင်းအဝယ်ပြုမှုဆက်ဆံရေးတွင်တည်ရှိပြီးပါတီနှစ်ခုသည်မဟာဗျူဟာမြောက်နှင့်အဆင့်မြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကင်းမဲ့နေသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ပါတီနှစ်ခု၏အရင်းအမြစ်များသည်ချိတ်ဆက်မှုမရှိခြင်းနှင့်စျေးကွက်အတွင်းရှိဘုံအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု၏ရည်မှန်းချက်သည် ...
128th Canton Fair ၁၀.၁၅ မှ ၁၀.၂၄ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန်းသို့ ၁.၂၁၅-၁၅-16 လာရောက်လည်ပတ်ရန်ကြိုဆိုပါသည်
ယခုနှစ်ကမ္ဘာပေါ်၌သရဖူအဆုတ်အအေးမိပျံ့နှံ့မှုကြောင့်ယခုနှစ် Canton Fair ကိုအော့ဖ်လိုင်းမှအွန်လိုင်းအထိကျင်းပခဲ့သည်။ 128th Canton Fair ကိုစတင်ခဲ့ပြီးကျင်းပသည့်အချိန်သည်အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်မှအောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်အထိဖြစ်သည်။ ယခုငါတို့အထူး o ... ကြည့်ရှုရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်